सुर्खेतमा कुन नगर तथा गाउपालीकामा को मेयर र उमपेयरको उम्मेदवार ? – Enayanepal.com
२०७७ मंसिर ८, सोमबार
सुर्खेतमा कुन नगर तथा गाउपालीकामा को मेयर र उमपेयरको उम्मेदवार ?
२०७४, २० बैशाख बुधबार मा प्रकाशित
सुर्खेत, वैशाख । स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत सुर्खेतमा पनि मंगलबार उम्मेद्धारी मनोनयन दर्ता भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदारको टुङगो लगाइसकेका नेपाली कँग्रेस ,एमाले,माओवादी केन्द्र लगायतका राजनैतिक दलहरुले उत्साहजनक सहभागिता र बाँजा गाँजा प्रचार प्रसार सहित देखिएको थियो । पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाष ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ६ नम्बर प्रदेश सहित तीन र चार नम्बर प्रदेशमा हर्षोल्लासका साथ उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ ।
बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेको समयमा फरकफरक पार्टीले बाजागाजासहित ¥याली निकाली जीतको दाबी गर्दै आ–आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन् । ५ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाँउपालिकामा मंगलबार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजे सम्म उम्मेदारी मनोनयन दर्ता गरिएको हो । प्रदेश नम्बर ६ को सम्भावित राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर पदका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मेयरमा रत्न गाहा र उपमेयरमा हरिमाया शर्माले उम्मेद्वारी दर्ता गराएको छ ।
यस्तै , पञ्चपुरी नगरपालिका मेयर धन बहादर बिक उप मेयरमा सिता पाण्डेको उम्मेदारीको मनोनयन दर्ता भएको छ । यस्तै लेकबेसी नगरपालिका खडकबहादुर घर्ति मगर उप मेयर आरती बिकको उम्मेदारी मनोनया दर्ता गरिएको हो । यस्तै गुर्भाकोट नगरपालिका हिराबहादुर थापा उप मेयरमा नन्दाकली बिकलाई मनोनयन दर्ता गरेको छ । यस्तै भेरीगंगा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनेमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कृष्णप्रसाद गिरी र डिलसरा थापाको उम्मेदारी मनोनयन दर्ता भएको छ ।
यस्तै गाँउपालिका तर्फ सिम्ता गाँउपालिका का अध्यक्ष झृुप बहादर बुढा उपाध्क्ष चन्द्रकला खत्री चिङगाँडगाँउपालिका बोधविक्रम जिसी उपाध्यक्ष तेजकुमारी राना बराहताल गाँउपालिकामा बलबहादुर कठायत गोमा गुरुङ चौकुने गाँउपालिका खडक विवश बाँसपाने र बिमला जिसी रहेका नाम दर्ता गरेको छ ।
यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट बालाराम शर्मा र उपमेयरमा मोहनमाया ढकाल,उम्मेदारी मनोनय दर्ता गरेको छ । यस्तै पञ्चपुरी नगरपालिका मेयर मन बहादुर बिक राज कुमारी तिवारी को उम्मेदारी मनोनय दर्ता भएको छ ।
यस्तै लेकबेशी नगरपालिका गगनंिसंह सुनार उप मेयर शान्ति छन्तेल रहेका छन । यस्तै भेरीगंगा नगरपालिका यज्ञ प्रसाद ढकालको उम्मेदारी , मनोनयन गरेको छ । यस्तै ग्ुर्भाकोट नगरपालिका देव बहादुर खत्री शुसिला बिकको उम्मेदारी मनोनय दर्ता भएको छ । यस्तै सिम्ता गाँउपालिकामा कविन्द्र कुमार केसी,चन्द्रा शाहि चिङगाँड गाँउपालिका बखत खत्री, दीपा राना बराहताल गाँउपालिका ताराकेशर गौतम आशा थापा कार्की चौक्ुने गाँउपालिका धिरबहादुर शाही निर्मला रानाको नाम मनोनयन गरेको छ ।
यस्तै नेपाली कंग्रेसको तर्फबाट वीरेन्द्र नगरपालिका मेयरमा देवकुमार सुवेदी र उपमेयरमा जानकी सिंहले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन । यस्तै पञ्चपुरी नगरपालिकामा उपेन्द्र थापा उप मेयर मुक्ति रेग्मी पुरीको उम्मेदारी दर्ता भएको छ ।,,यस्तै लेकबेसी नगपालिकामा उमेश पौडेल, लालमती विकको उम्मेदारी दर्ता भएको छ ।,यस्तै गुर्भाकोट नगरपालिकामा हस्त पुन मैना बिकका उम्मेदारी दर्ता भएको हो । भेरी गंगा नगरपालिका भुपेन्द्र बहादुर चन्द उप मेयर रेणु ढकाल रहेका छन ।
यस्तै सिम्ता गाँपालिकका खडक पोखरेल चिङगाँड गाँउपालिकामा देव बहादुर चन्द्र मनमाया आचार्या बराहताल गाँउपालिका तेज बहादुर बस्नेत शोभा शर्मा चौकुने गाँउपालिका गजराज जोशी मनमाया आचार्य को नाम मनोनयन गरेको हो ।
यस्तै राप्रपा नेपाल सु्र्खेतले वीरेन्द्रनगरमा मेयरका उम्मेदार ईशवर श्रेष्ठ उप टिकम योगीको उम्मेदारी दर्ता गरेको छ । यस्तै पञ्चुरी नगरपालिका कर्णबहादुर रेग्मी हरिकला तारामी लेकबेशी नगरपालिका जितबहादुर खडका विमला आर्चाय ग्ुर्भाकोट नगरपालिका लक्ष्मिप्रसाद शर्मा भक्ती राना भेरीगंगा नगरपालिकाबाट गोपाल हमाल, चन्द्रकला नेपाली वादीलाई मनोयन गरेको छ । भने सिम्ता गाँउपालिका र बराहताल गाँउपालिकाकाबाट राप्रपा नेपालको खाली रहेको छ ।
यस्तै चिङगाँड गाँउपालिका अमृत राना धनसरा जैशी चौकुन गाँउपालिकाबाट पूर्ण सु्नाखरीको नाम मनोनयन गरेको हो । यस्तै नेमकिपाले वीरेन्द्रनगरबाट शेर बहादुर शाहीलको नाम मनोनयन गरेको छ भने अन्य नगरपालिका तथा गाँउपालिकामा खाली देखिएको छ ।
यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदार वीरेन्द्र नगरपालिकाबाट मेयरमा गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल उप मेयरमा भोज प्रसाद चपाई रहेका छन । यस्तै भेरीगंगामा राप्रपा राष्टिय जनमोर्चा को मेयरमा तुलारम शर्मा रहेका छन । यस्तै संघिय समाजवादी फोरमका मेयरमा दीपलाल दमाई र उप मेयरमा कौशिला बिक भेरी गंगा नगरपालिकामा नयाँ शक्ति नेपालका मेयर डिलबहादुर डागीको मनोनयन दर्ता भएका छ ।
.वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर पदकै लागि सामाजिक अभियान्ता गेहेन्द्र प्रसाद दाहालले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएर बागी जित्ने दाबी गरेका छन ।
विद्यार्थीमा कोरोना देखिए पछि हुम्लाका विद्यालय पुन बन्द
धान भित्र्याउन व्यस्त किसान, दैलेखमा धान उत्पादन बढ्ने